Iza moa i Jesosy Kristy | Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra eran'izao tontolo izao Soisa, Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Malagasy > Mazava ho azy fa ny Baiboly > Iza moa i Jesosy Kristy?
Andriamanitra, ny Zanaka, dia olona faharoa ao amin'ny Andriamanitra, noforonin'ny Ray hatrizay. Izy no teny sy itovizan'ny Ray - amin'ny alalany ary ho azy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nirahina avy amin'ny Ray ho toy i Jesoa Kristy, Andriamanitra, nambara tamin'ny nofo hahafahantsika mahazo ny famonjena. Nahazo ny Fanahy Masina izy ary naterak'i Maria Virjiny - Izy dia Andriamanitra sy ny olombelona rehetra, mitambatra toetra roa ao anaty olona iray. Izy, Zanak'Andriamanitra sy Tompon'ny zava-drehetra, dia mendrika homem-boninahitra sy ivavahana. Raha ilay mpamonjy voalazan'ny faminaniana, dia maty noho ny fahotantsika izy, natsangana tamin'ny vatana ary niakatra ho any an-danitra, ary miasa ho mpanelanelana eo amin'ny olona sy Andriamanitra izy. Hiverina am-boninahitra izy mba hitondra ny firenena rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny maha mpanjaka mpanjaka (Jaona 1,1.10.14; Kolosiana 1,15-16; Hebreo 1,3; Jaona 3,16; Titosy 2,13; Matio 1,20; Asa 10,36; 1 Korintiana 15,3-4; Hebreo 1,8; Apokalypsy 19,16).
Ny Kristianisma dia momba an'i Kristy
“Ny tena zava-dehibe, ny kristianisma dia tsy rafitra tsara sy be pitsiny toa ny Buddhism, ny fitsipi-pitondran-tena manara-dalàna toa ny Islam, na fombafomba tsara toy ny nasehon'ny fiangonana sasany. Ny tena fiandohan-draharaha voalohany ho an'ny fifanakalozan-kevitra momba ity lohahevitra ity dia ny hoe ny 'Kristianisma "- araka ny lazain'ny teny iray - dia momba an'i Jesoa Kristy iray manontolo. (Dickson 1999: 11).
Ny Kristianisma, na dia heverina ho sekta jiosy tamin'ny voalohany aza dia tsy nitovy tamin'ny fivavahana jiosy. Nino an 'Andriamanitra ny Jiosy, fa ny ankamaroany tsy manaiky an'i Jesosy ho Kristy. Vondrona iray hafa resahina ao amin'ny Testamenta Vaovao, ilay "mpanompo sampy" mpanompo sampy, izay mpikambana ao aminy i Kornelio (Asan'ny Apôstôly 10,2), dia nino an'Andriamanitra ihany koa, nefa koa, tsy ny rehetra no nanaiky an'i Jesosy ho ilay Mesia.
«Ny tenan'i Jesosy Kristy dia ivon'ny teolojia kristiana. Raha ny teolojia dia azo faritana ho 'miresaka momba an' Andriamanitra, 'ny teolojia kristiana' dia manome ny anjara asan'i Kristy andraikitra lehibe » (McGrath 1997: 322).
«Ny kristianisma dia tsy vitan'ny hevitra mifanaraka amin'ny tenany na maimaim-poana; Izy io dia manome valiny mitohy amin'ireo fanontaniana napetraky ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny kristianisma dia fivavahana manan-tantara iray izay natao ho valin'ny andian-tantara manokana mifantoka amin'i Jesoa Kristy ».
Tsy misy kristiana raha tsy Jesosy Kristy. Iza io jesosy io Inona no tena mahaliana azy mikasika an'i Satana te-handringana azy ary hanajanona ny tantaran'ny nahaterahany (Apokalypsy 12,4: 5-2,1; Matio 18)? Inona moa no mahatafavoaka ny mpianany azy, hany ka voampanga ho nanova an'izao tontolo izao izy ireo?
Tonga eo amintsika amin'ny alàlan'i Kristy Andriamanitra
Ny faran'ny fianarana farany dia nifarana tamin'ny fanamafisana fa tsy mahalala afa-tsy Andriamanitra irery isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy (Matio 11,27), izay no tena taratry ny toetran'Andriamanitra anaty (Hebreo 1,3). Amin'ny alalàn'i Jesosy ihany no ahafahantsika mahafantatra izay mitovy amin'Andriamanitra, satria i Jesoa irery ihany no endrika naseho an'ny Ray (Kolosiana 1,15).
Ny Evanjely dia manazava fa Andriamanitra dia niditra tao amin'ny refin'olombelona tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Ny apostoly Jaona dia nanoratra hoe: "Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny dia ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no Teny" (Jaona 1,1). Ilay Teny dia nantsoina hoe Jesosy izay "tonga nofo ary nonina teo amintsika" (Jaona 1,14).
Jesosy, ny Teny, dia olona faharoa ao amin'ny andriamanitra, izay "miaina tanteraka amin'ny maha-Andriamanitra". (Kolosiana 2,9). Jesosy dia olombelona ary Andriamanitra, Zanak'olona sy Zanak'Andriamaitra. «Satria sitrak'Andriamanitra ny hivelomana be dia be ao aminy» (Kolosiana 1,19), «ary avy amin'ny fahafenoany no ahazoantsika fahasoavana rehetra ho fahasoavana» (Jaona 1,16).
"Kristy Jesosy, izay manana endrika araka an'andriamanitra, dia tsy nihevitra azy io ho fandrobana tsy hitoviana amin'andriamanitra, fa nanetry tena ary naka ny endriky ny mpanompo, dia nekena ho olombelona ary toa nekena ho olombelona" (Filipiana 2,5-7). Manazava ity fizarana ity fa namoaka ny tenany tamin’ny tombontsoam-pitiavan’Andriamanitra i Jesoa ary tonga iray amintsika satria «izay mino ny anarany dia manan-jo ho tonga zanak’Andriamanitra» (Jaona 1,12). Isika mihitsy dia mino fa mifanatrika amin'ny maha-Andriamanitra ananan'i Jesosy avy any Nazareta manokana isika, ara-tantara sy eskolojika. (Jinkins 2001: 98).
Rehefa mihaona amin'i Jesosy isika dia mihaona amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy: "Raha nahafantatra ahy ianareo, dia ho fantatrareo koa ny Ray" (Jaona 8,19).
Jesosy Kristy no mpamorona sy mpanohana ny zava-drehetra
Momba ny "ny Teny" i John dia manazava amintsika fa "tamin'ny voalohany dia tao amin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia mitovy ary tsy misy mitovy, tsy misy atao namboarina » (Jaona 1,2-3).
Nanohy ity hevitra ity i Paul: "... tamin'ny alalany sy taminy no nahariana ny zavatra rehetra" (Kolosiana 1,16). Ny taratasy ho an'ny Hebreo koa dia miresaka momba an'i "Jesosy izay ambany noho ny anjely" (izany hoe tonga olombelona izy "" ho an'iza ny zava-drehetra ary izay misy ny zava-drehetra " (Hebreo 2,9: 10). Jesosy Kristy dia "ambonin'izy rehetra ary misy ny zava-drehetra ao aminy" (Kolosiana 1,17). “Entiny amin'ny teny mafonja ny zava-drehetra” (Hebreo 1,3).
Tsy nahafantatra ny toetran'Andriamanitra ny mpitondra jiosy. Hoy i Jesosy taminy: "Izaho dia avy amin'Andriamanitra" ary "talohan'ny nahatongavan'i Abrahama dia" (Jaona 8,42.58). Ny "IZAHO" dia nanonona ny anarana izay nampiasain'Andriamanitra ho an'ny tenany fony izy niteny tamin'i Mosesy (Eksodosy 2:3,14), ary vokatr'izany dia nitady hitora-bato azy ny Farisiana sy ny mpisolovava, satria nanambara izy fa masina (Jaona 8,59).
Nanoratra momba an'i Jesosy i Jaona: "Hitanay ny voninahiny, voninahitra ho Zanaka Lahitokan'ny Ray, feno fahasoavana sy fahamarinana" (Jaona 1,14). Jesosy dia zanakalahy tokana sy rain'ny rainy.
Rehefa natao batisa Jesosy, dia niantso azy Andriamanitra: "Zanako malalako ianao, faly aminao aho" (Marka 1,11:3,22; Lioka).
Rehefa nahazo fahitana momba ny Fanjakan'Andriamanitra i Petera sy Jaona, dia nihevitra i Jesosy fa nitovy tamin'ny an'i Mosesy sy i Elia. Tsy takany an-tsaina fa "mendrika kokoa noho i Mosesy" i Jesosy (Heb. 3,3), ary nisy olona lehibe noho ny mpaminany nitsangana teo afovoany. Ary nisy feo avy tany an-danitra indray niantso hoe: “Ity no zanako malalako izay sitrako indrindra; tokony henonao izany! " (Matio 17,5). Satria Zanak'Andriamanitra i Jesosy, tokony hohenointsika koa izay nolazainy.
Io no andalana lehibe indrindra tamin'ny fanambarana nataon'ny apôstôly rehefa nanaparitaka ny vaovao tsara momba ny famonjena ao amin'i Kristy izy ireo. Mariho ny Asan'ny Apôstôly 9,20, izay milaza momba an'i Saoly, talohan'ny nahafantarana azy hoe Paul: "Ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'i Jesosy tao amin'ny sinagoga izy fa Zanak'Andriamanitra." Jesosy dia "natsangana araka ny Fanahy izay manamasina, amin'ny maha Zanak'Andriamanitra azy amin'ny hery amin'ny fitsanganan'ny maty (Romana 1,4).
Ny sorona ataon’ny Zanak’Andriamanitra dia ahafahana mamonjy ny mino. «Satria tia an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia nomeny ny Zanany lahitokana, ka izay rehetra mino azy dia tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay» (Jaona 3,16). "Nandefa ny Zanaka ho Mpamonjy izao tontolo izao ny Ray" (1 Jaona 4,14).
Jesosy dia Tompo sy Mpanjaka
Tamin'ny fahaterahan'i Kristy dia nanambara izao hafatra izao tamin'ny mpiandry ondry ny anjely: «Fa ny Mpamonjy no teraka taminao anio, dia Kristy Tompo ao an-tanànan'i Davida» (Lioka 2,11).
Ny fanendrena an'i Jaona Mpanao Batisa dia ny "manomana ny làlan'ny Tompo" (Marka 1,1-4; Jaona 3,1-6).
Tao amin'ny fanolorana fampidirana azy tao amin'ireo taratasy isan-karazany, i Paoly, Jakoba, Peter ary Jaona dia nanondro ny “Jesosy Kristy Tompo” (1 Korintiana 1,2: 3-2; 2,2 Korintiana 1,2: 1,1; Efesiana 1: 1,3; Jakoba 2: 3; Petera; Jaona; sns)
Ny teny hoe Lord dia manondro fiandrianana amin'ny lafiny rehetra amin'ny finoana sy ny fiainana ara-panahy. Mampahatsiahy antsika ny Apokalypsy 19,16 fa ny Tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy,
«Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tompon'ny Tompo»
Ao amin'ny bokiny Invitation to Theology (Fanasana amin'ny teolojika) ilay teolojika maoderina Michael Jinkins dia nametraka izany toy izao: «Fampiharana tanteraka sy feno ny fangatahanany antsika. Isika feno, vatana sy fanahy, amin'ny fiainana ary amin'ny fahafatesana ho an'i Jesosy Kristy Tompo » (2001: 122).
Jesosy dia ilay Mesia nambara mialoha, ilay Mpamonjy
Ao amin'ny Daniela 9,25, Andriamanitra dia nanambara fa ho avy hamonjy ny olony ny Mesia Andriana. Ny Mesia dia midika hoe "ilay voahosotra" amin'ny teny hebreo. Andrew, mpanara-dia an'i Jesosy voalohany, dia nahatsapa fa izy sy ireo mpianatra hafa dia "nahita ny Mesia" tao amin'i Jesosy, izay nandika avy amin'ny teny grika ka "ilay Kristy" (ny voahosotra) averina (Jaona 1,41).
Betsaka ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha no niresaka ny fiavian'ny Mpamonjy. Ao amin'ny fitantarany ny nahaterahan'i Kristy, matetika i Matio dia mitantara amin'ny antsipirihany ny fomba nahatanterahan'ireo faminaniana momba ny Mesia ireo teo amin'ny fiainana sy ny asan'ny Zanak'Andriamanitra, izay noraisin'ny Fanahy Masina tamin'ny viriosy iray antsoina hoe Maria ary niantso an'i Jesosy rehefa tonga olombelona nanjary midika hoe mpamonjy. "Nefa tonga izany rehetra izany mba ho tanteraka izay nolazain'ny Tompo tamin'ny alàlan'ny Mpaminany (Matio 1,22).
Nanoratra i Lioka: «Izay rehetra nosoratako dia tsy maintsy tanterahina ao amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo» (Lioka 24,44). Tsy maintsy nahatanteraka ny faminaniana momba ny mesianika izy. Ireo evanjelista hafa dia mijoro ho vavolombelona fa i Jesosy no Kristy (Marka 8,29; Lioka 2,11; 4,41; 9,20; Jaona 6,69; 20,31).
Ny Kristiana voalohany dia nampianatra fa "Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ary hitory ny fahazavana amin'ny olony sy amin'ny jentily" (Asan’ny Apostoly 26,23). Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe "tena Mpamonjin'izao tontolo izao tokoa i Jesosy" (Jaona 4,42).
Jesosy dia miverina amin'ny famindram-po sy amin'ny fitsarana
Ho an'ny kristiana dia ny tantara manontolo no mitarika sy misintona amin'ny toe-javatra iainan'i Kristy. Ny tantaran'ny fiainany dia ivon'ny finoantsika.
Tsy mbola vita anefa ity tantara ity. Mitohy hatrany amin'ny vanim-potoana ao amin'ny Testamenta Vaovao ka hatramin'ny mandrakizay izany. Manazava ny Baiboly fa miaina ao anatintsika i Jesosy, ary ny fomba anaovany an'izany dia horesahina amin'ny lesona manaraka.
Ho avy i Jesosy (Jaona 14,1: 3-1,11; Asan'ny Apostoly 2:4,13; 18 Tesaloniana 2: 3,10-13; Petera, sns.). Miverina izy tsy hiatrika ny ota (Efa nanao izany tamin'ny alàlan'ny sorona nataony izy) fa ho famonjena (Heb. 9,28). Ao amin'ny "seza fiandrianan'ny fahasoavana" (Hebreo 4,16) "hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy" (Asan'ny Apostoly 17,31). “Fa ny zonay sivily dia any an-danitra; avy aiza no andrasantsika ny Mpamonjy, Jesosy Kristy Tompo " (Filipiana 3,20).
Ny Soratra Masina dia manambara an'i Jesosy fa ny Teny tonga nofo, ny Zanak'Andriamanitra, ny Tompo, ny Mpanjaka, ny Mesia, ilay Mpamonjin'izao tontolo izao, izay ho avy fanindroany mba hanehoana famindram-po sy fitsarana. Io no ivon'ny finoana Kristiana satria raha tsy misy an'i Kristy dia tsy misy ny Kristianisma. Mila mandre izay ambarany isika.